थाहापाउनुहोस् : किशोर अवस्थामा ब्रेकअप हुदाँ भुलाउने यी ४ उपाय ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
थाहापाउनुहोस् : किशोर अवस्थामा ब्रेकअप हुदाँ भुलाउने यी ४ उपाय !
हामीले भन्ने गर्छौं माया नै संसार हो । प्रेमबिना यो संसारको कल्पना पनि गर्न सकिदैन तर कहिले काहीँ त्यति सुनौलो प्रेमले जीवलाई नै तहश नहश बनाउने गर्छ ।
अहिले सानो उमेरमा नै प्रेम जालमा फस्ने पछि ब्रेकप भई देह त्याग गर्नेको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दो देखिन्छ । त्यसकारण पनि यसबारे सचेतना दिनु जरुरी हुन्छ की उमेर अनुसारको प्रेम प्रतिको धारणा भनिन्छ नि, प्रेमको उमेर हुन्न। प्रेमले स्वास्थ्यमा निकै फाइदा गर्छ।
शरीरमा सकारात्मक उर्जा भर्छ। प्रेम जुनसुकै उमेरमा पनि हुन्छ। त्यसैले ते किशोर उमेर होस्, प्रौढ वा वृद्ध, जुनसुकै उमेरमा पनि प्रेमको जालमा मान्छे सजिलै फस्न सक्छ।
प्रेम सम्बन्ध स्वस्थ छ भने त स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ तर जब प्रेममा शंका अनि तनाव उत्पन्न हुन्छ त्यसलै झनै असर गर्छ।
उमेर अनुसारको प्रेम र त्यसबाट उत्पन्न हुने तनाव तथा अवसादको प्रतिक्रिया भने उमेरअनुसार फरक हुन्छ। वृद्धावस्थामा हुने प्रेमको उल्झन् वा तनाव रुपमा व्यवस्थापन हुनसक्छ।
किशोरकालको प्रेमले ल्याएको तनाव र उल्झन तुलनात्मक रुपमा जटिल मात्र होइन व्यवस्थापन गर्न कठिन किसिमको समेत हुनसक्छ।
किशोरकालमा हुने प्रेम सम्बन्ध र त्यसबाट उत्पन्न समस्याले बढाउने तनावको असरले पढाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। आफ्ना सन्तानलाई पढाइको महत्बबारे सम्झाउनुस्। अहिले उमेर पढ्ने उमेर भएकाले प्रेममा भन्दा पढाइमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुस्। पढाइ सक्किएपछि गरिने वा हुने प्रेम वास्तविक हुन्छ र त्यसले ल्याउने सुखद् हुने भनी बुझाउनुस्। प्रेमका कारण बिग्रने पढाइले जीवनमा पार्ने असरबारे केही उदाहरणसहित बुझाउनुस्। आफूले सम्झाउन नसके परामर्शदाताको सहयोग लिनुस्।
मानिसको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण भनेको जन्म,मृत्यु र विवाहलाई मानिन्छ । अहिलेको बर्तमान समयमा सम्वन्धलाई